Abakhiqizi be-AP yangaphakathi & abahlinzeki - China Indoor AP Factory
Ipulatifomu lamafu elihlakaniphile
Isikhungo Sedatha Shintsha
L3 + Shintsha
L3 Industrial Shintsha
Ukushintsha okulula okuphethwe
I-100M engeyona i-PoE
I-1000M engeyona i-PoE
Isilawuli Sokufinyelela se-SMB
I-Multi-core Security Gateway
Isixazululo se-Campus Network
Isixazululo Senethiwekhi Yedatha
Isixazululo Senethiwekhi ye-ISP
Isixazululo sohlelo lokusebenza
WL8200-I1 802.11ac zasendlini D ...
I-DCRS-7600E Series Core Laye ...
I-WL8200-X10 Indoor 802.11ax Wi-Fi 6 Triple Band Enterprise AP
I-WL8200-X10 isizukulwane esilandelayo se-Wi-Fi 6 yebhizinisi eliphezulu le-Wi-Fi AP (i-Access Point) ekhishwe yi-DCN, ingaxhasa i-802.11ax futhi inikeze ukuxhumana okungu-2.5G Ethernet uplink. Ngokusebenza okuphezulu kwe-6.82Gbps bandwidth, i-WL8200-X10 kulindeleke ukuthi ibe nokuxhumana okuphezulu kwamakhasimende ukuletha ulwazi olungcono lomsebenzisi we-Wi-Fi. Ngemigwaqo ehamba phambili yomkhakha ohola kathathu webhizinisi, i-WL8200-X10 iyisinqumo esihle sezimo zokufinyelela ezinamandla amakhulu kanye ne-bandwidth ephezulu ezinjenge-AR / VR application, 4K ...
I-DCN WL8200-I3 (R2.0) ibhizinisi elisebenza kahle kakhulu i-Wi-Fi AP (Access Point), elingasekela i-802.11ac Wave2 futhi linikeze ukuxhumeka kwe-uplink yeGigabit Ethernet. Ngokusebenza okuphezulu kwe-2.9Gbps ​​bandwidth, i-WL8200-I3 (R2.0) kulindeleke ukuthi ibe nokuxhuma kwamakhasimende aphezulu kakhulu ukuletha ulwazi olungcono lomsebenzisi we-Wi-Fi. Inikeza ngamakhono aphelele wensizakalo kanye nezici ezinjengokuthunyelwa okulula, ukutholakala okuzenzakalelayo kwe-AC nokucushwa, ukuthembeka okuphezulu, ukuphepha okuphezulu, kanye nemanag yesikhathi sangempela ...
I-DCN WL8200-I2 (R2.0) iyinkampani esebenza kahle nge-Wi-Fi AP. Ixhasa okujwayelekile kwe-802.11ac Wave2 futhi inikezela ngokuxhumana okuphezulu kweGigabit Ethernet. Umkhawulokudonsa wokufinyelela ophakeme ungafika ku-1167Mbps. Inikeza ngamakhono aphelele wensizakalo kanye nezici ezinjengokuthunyelwa okulula, ukutholakala okuzenzakalelayo kwe-AC nokucushwa, ukuthembeka okuphezulu, ukuphepha okuphezulu, nokuphathwa kwesikhathi sangempela nokugcinwa. I-WL8200-I2 ilungele izimakethe zebhizinisi, uhulumeni nezokungenisa izihambi. Izici ezibalulekile futhi Hi ...
I-WL8200-I1 ibhizinisi elingabizi kakhulu le-802.11ac wireless access point (AP) elingasekela i-2 × 2 MIMO nemifudlana engu-4 yendawo. Inikeza ngamakhono aphelele wensizakalo kanye nezici ezinjengokuthunyelwa okulula, ukutholakala okuzenzakalelayo kwe-AC nokucushwa, ukuthembeka okuphezulu, ukuphepha okuphezulu, nokuphathwa kwesikhathi sangempela nokugcinwa. Kususelwa kuzinga le-802.11ac, inani lalo lonke lokufinyelela lingafinyelela ku-1167Mbps elisebenza kumaketanga ezentengiselwano, ezokwelapha, ukugcinwa kwezimpahla, ukukhiqizwa, kanye nezinsiza ...
Ikheli:Digital Technology Plaza, NO.9 Shangdi 9th Street, Haidian District, Beijing, China
Ucingo: +86 400 810 9119
Ucingo:+86 (10) 82707033
I-imeyili sales @ dcnglobal.com, dcnsales @ digitalchina.com